योनी कसिलो बनाएकाे हाे कि भए कै हाे ? – आफ्नो प्रेरक संसार
योनी कसिलो बनाएकाे हाे कि भए कै हाे ?
Bibas chetan — १४ जेष्ठ २०७६, मंगलवार २०:३४0comment
व्यक्तिअनुसार लिंग वा योनिको नाप र आकारमा धेरै भिन्नता हुन्छ । कतिपय स्थितिमा लिंगको गोलाइसँग तुलना गरी यो खुकुलो भयो कि भनिन्छ । तपाईंले कसरी योनिको नाप लिनुभयो र खुकुलो भयो भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो ? योनि मांसपेशीले बनेको एकदमै लचिलो वा भनौं तन्किन सक्ने गुण भएको नली आकारको अंग हो, जसको लम्बाइ सामान्यतया ३ देखि ४ इन्च हुन्छ ।